နေအိမ် - ဗီဇာအထောက်အကူ
UPDATE - အမေရိကန်သံရုံးများပြန်ဖွင့်နေကြသည်။ Visa Helper သည်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ခရီးသွားခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ မည်သည့်နောက်ဆုံးသတင်းများကိုမဆို COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုကိုစောင့်ကြည့်နေဆဲဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး all-in-one ဗီဇာပလက်ဖောင်း
ဒါကြောင့်ငါတို့ Visa Helper လုပ်ခဲ့တယ်။ သင်၏တစ်နေရာတည်းတွင်အွန်လိုင်းဗီဇာနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရင်းအမြစ်ဌာန။
သင်အမေရိကန်ဗီဇာလျှောက်ထားတော့မည်လား၊ လျှောက်ထားပြီးပြီလားလမ်းတစ်လျှောက်တွင်ရှိနေမည်လား၊ ငါတို့ပလက်ဖောင်း၏လမ်းညွှန်များ၊ ဉာဏ်စမ်းပဟေquိများနှင့်ကိရိယာများသည်သင်၏ဗီဇာကိုအတည်ပြုရန်မြန်ဆန်သည်။
ဘယ်နိုင်ငံကပါလဲ အယ်လ်ဘေးနီးယား အယ်လ်ဂျီးရီးယား အင်ဂိုလာနိုင်ငံ အာဂျင်တီးနား အာမေးနီးယား အဇာဘိုင်ဂျန် ဘာရိန်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဘယ်လာရုစ် ဘီနင် ဘူတန် ဘိုလီးဗီးယား ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနား ဘော့ဆွာနာ ဘရာဇီး Burkina Faso ဘရူနိုင်း ဘူလ်ဂေးရီးယား ကိပ်ဗာဒီ ကမ္ဘောဒီးယား ကင်မရွန်း ချဒ် တရုတ်နိုင်ငံ ကိုလံဘီယာ Cote d'Ivoire ကော့စတာရီကာ ခရိုအေးရှား ကျူးဘား ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ အီကွေဒေါနိုင်ငံ အဲဂုတ္တုပြည်၌ အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ အီရီထရီးယား အီသီယိုးပီး gabon ဂမ်ဘီယာ Georgia ဂါနာ ဂွာတီမာလာ ဂီနီနိုင်ငံ ဟွန်ဒူးရပ်စ် ဟောင်ကောင် အိႏၵိယ အင်ဒိုနီးရှား အီရန် အီရတ် ဣသရလေ ဂျမေကာ ယော်ဒန်မြစ် ကာဇက်စတန် ကင်ညာ ကူဝိတ် ကာဂျစ္စတန် လာအိုနိုင်ငံ လေဗနုန်တော လစ်ဗျားနိုင်ငံ မက်ဆီဒိုးနီးယား မာလာဝီ မေလးရွား မာလီ မောရစ်ရှ မက္ကစီကို မော်လ်ဒိုဗာ မိုနာကို မွန်ဂိုလီးယား မွန်တီနီဂရိုး မော်ရိုကို မိုဇမ်ဘစ် နမီးဘီးယား နီပေါ နီကာရာဂွာ နိုင်ဂျာ နိုင်ဂျီးရီးယား အိုမန် ပါကစ္စတန် ပါလက်စတိုင်း ပနားမား ပါရာဂွေး ပီရူး ဖိလစ္ပုိင္ ကာတာနိုင်ငံ ရိုမေးနီးယား ရုရှားနိုင်ငံ ရဝမ်ဒါ ဆော်ဒီအာရေဗျ senegal ဆားဘီးယား ဆီယာရာလီယွန် စင္ကာပူႏုိင္ငံ ဆိုမာလီယာ တောင်အာဖရိက သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ဆူဒန် Tajikistan တန်ဇန်းနီးယား ထုိင္းႏုိင္ငံ တိုဂို တူနီးရှား ကြက်ဆင် တာ့ခ်မင်နစ္စတန် ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ ယူကရိန်း အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု ဥရုဂွေး ဥဇဘက် ဗင်နီဇွဲလား ဗီယက်နမ် ယီမင် ဇမ်ဘီယာ ဇင်ဘာဘွေ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
မိနစ် ၃၀ အောက်အမေရိကန်ဗီဇာလျှောက်ထားနည်းကိုလေ့လာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ online Visa Journey tool သည်သင်၏ဗီဇာသို့မဟုတ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးခရီး၌သင်ရောက်နေသောနေရာကိုအတိအကျကျဉ်းမြောင်းစေသောရိုးရှင်းသော multiple-choice မေးခွန်းများကိုအသုံးပြုသည်။
သင်၏တုန့်ပြန်မှုများကို အခြေခံ၍ Visa Helper သည်သင်၏ဗီဇာလျှောက်လွှာကိုလျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်အတွက်သင်လိုက်နာရန်လိုအပ်သည့်တိကျသောလမ်းညွှန်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သောအချက်အလက်များကိုသင့်အားယူဆောင်လာသည်။
- နားလည်ရလွယ်ကူသောလမ်းညွှန်များ -
လမ်းညွှန်တစ်ခုစီတွင်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအခြေအနေများနှင့်မူရင်းနိုင်ငံနှင့်သက်ဆိုင်သောနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအချက်အလက်များပါ ၀ င်သည်။
သင်၏ဖြစ်နိုင်ခြေရမှတ်ပေါ်မူတည်ပြီးဗီဇာလျှောက်ထားရာတွင်သင်၏အချိန်၊ ငွေနှင့်အားစိုက်ထုတ်မှုများကိုအန risk တရာယ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းပေါ်သို့လက်မှတ်ထိုးခြင်းသည်ကျွမ်းကျင်ဗီဇာနှင့်လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများကိုသာသီးသန့်သုံးခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
သင်၏ဗီဇာအမှု၌ကူညီရန်အကောင်းဆုံးမိတ်ဖက်နှင့်ဆက်သွယ်မှုသေချာစေရန်မိတ်ဖက်တစ် ဦး စီ၏အရည်အသွေးနှင့်ဂုဏ်သတင်းကိုဂရုတစိုက်စစ်ဆေးပြီးဖြစ်သည်။
သင်၏ဗီဇာသို့မဟုတ်လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးခရီးတွင်သင်ရောက်ရှိနေသည့်နေရာအတိအကျကိုကျဉ်းမြောင်းအောင်ကူညီရန်ရိုးရှင်းသောရွေးချယ်မှုများစွာရှိသောမေးခွန်းများကိုဖြေပါ။
သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဗီဇာလမ်းညွှန်များကိုရယူပြီးသင်၏ Visa အရည်အချင်းပြည့်မီမှုစာမေးပွဲနှင့်အတူဗီဇာရရှိရန်သင့်အခွင့်အရေးကိုခန့်မှန်းပြီးအတည်ပြုထားသောတတိယပါတီမိတ်ဖက်များနှင့်ပူးပေါင်းပါ။
အပြည့်အဝသော့ဖွင့်ပါ တစ်သက်တာ ဒေါ်လာ ၂၅ ဒေါ်လာသာရှိသောတစ်ချိန်တည်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနည်းငယ်ဖြင့် Visa Helper ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
Visa Helper Platform သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်း
လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများနှင့်ဗီဇာထုတ်ပေးသူများ
Visa Helper ၌သင်မှတ်ပုံတင်သည့်အခါသင်ကိုယ်တိုင်အားလုံးကိုလေ့လာရန်မလိုအပ်သောအချိန်ကိုသက်သာစေရုံသာမကသင်သည်စျေးကြီးသောလျှောက်လွှာအမှားများမှသင့်အားအကာအကွယ်ပေးသည့်လက်လည်းရှိလိမ့်မည်။
ကျွန်မခင်ပွန်းကိုအိမ်ထောင်ဖက်ဗီဇာအတွက်ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားကနေဘယ်လိုလွှဲပြောင်းရမယ်ဆိုတာအတိအကျသိနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုခြင်းအလွန်လွယ်ကူသည်! ကျွန်တော့်ကို ၁၀ မိနစ်တောင်မပြည့်ခင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလျှောက်ရမယ်ဆိုတာသိတယ် ငါအလုံအလောက် Visa ကိုကူညီကျေးဇူးတင်နိုင်သလား!
ရုရှားရှိအမေရိကန်သံရုံးနှင့်ကိုင်တွယ်ရန်ခက်ခဲသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Fiance Visa တွန်းအားပေးရန်ဘာလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိခဲ့ပါ။ Visa Helper ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ထပ်ခြေလှမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိရန်အရာအားလုံးကိုယခုကျွန်ုပ်တို့သိရှိနိုင်ပါပြီ။ သူတို့ကအရာရာတိုင်းကိုသိဖို့အရမ်းလွယ်တယ်။ ကျွန်တော့်ဇနီးကဗီဇာလက်ကိုင်ထားပြီးယူအက်စ်အေမှာရှိတယ်။
Visa Helper ကကျွန်တော့်ဇနီးရဲ့ဘဝကိုလုံးလုံးပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သောဗီဇာအမျိုးအစား၊ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Spousal Visa သေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောအဆင့်တိုင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ခဲ့သည်။ Visa Helper ကိုအသုံးပြုရန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သောအခက်အခဲများရှိသူမည်သူမဆိုကျွန်ုပ်အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။
ငါဗာဂျီးနီးယားရှိငါ့အိပ်မက်တက္ကသိုလ်သို့လက်ခံခဲ့သည်တယ်! ငါ့မှာအချိန်မရှိ၊ ဗဟုသုတလည်းမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် Visa Helper ကအရမ်းရိုးရှင်းတယ်။ တစ်ရက်မပြည့်ခင်ကျောင်းသားဗီဇာလျှောက်ထားနိုင်ခဲ့တယ်။
Visa Helper သည်ကျွန်ုပ်၏ညီငယ်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်းပြီးနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့လာနိုင်ခြင်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ Vuel Helper ကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့အမှုအတွက်ကူညီဖို့ရှေ့နေတစ်ယောက်နဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့တယ်။ Visa Helper ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာများစွာ!
လက်ထပ်ထိမ်းမြားခွင့်ဗီဇာအတွက်မည်သို့လျှောက်ထားရမည်ကိုသုတေသနပြုပြီးလများစွာကုန်လွန်ပြီးနောက် ၇ နှစ်အရွယ်ကျွန်ုပ်၏ဇနီးသည်အမေရိကန်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ငါ Visa အထောက်အကူပြုတွေ့ရှိခဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် သူတို့၏ဗီဇာလမ်းညွှန်များကိုနားလည်ရန်နှင့်လိုက်နာရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ဒီလူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကြွေးတင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လက်ခံရရှိရန်စာရင်းသွင်းပါ (အပတ်စဉ်ထုတ်) သတင်းလွှာနောက်ဆုံးသတင်းများကိုသင်၏ inbox ထဲသို့တိုက်ရိုက်ပေးပို့သည်။
သင်၏ privacy သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး စားပေးဖြစ်သည်။ မေးလ်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုတင်းကြပ်စွာလျှို့ဝှက်ထားသည်။ သင်သည်အချိန်မရွေးစာရင်းပေးသွင်းနိုင်သည်။ သင်၏ပုဂ္ဂလိကသတင်းအချက်အလက်များကို GDPR နှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့မည်သို့စုဆောင်းသည်၊ မည်သို့စီမံသည်ကိုပိုမိုလေ့လာလိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးဇူးပြု၍ ကြည့်ပါ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ.
အမေရိကန်မှပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ပစ္စည်းများနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းများသည်တရား ၀ င်သောအကြံဥာဏ်မဟုတ်ပါ၊ သတင်းအချက်အလက်များအတွက်သာ။ မည်သည့်အကြောင်းအရာသို့မဟုတ်ပြPROနာကိုမဆိုအကြံဥာဏ်ရယူရန်သင်၏ရှေ့နေကိုဆက်သွယ်သင့်သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဝင်ရောက်ခြင်းသည်မည်သည့်ရှေ့နေ - ကလပ်သို့မဟုတ်ဆင်တူသောဆက်ဆံရေးမျိုးကိုမှမဖန်တီးပါ။
123 King Rd ။ အနောက်လမ်း, စီးတီး 1234
မူပိုင်ခွင့်© 2020 Visa Helper - All rights reserved
cookielawinfo-checbox- ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု 11 လအတွင်း ဤ cookie ကို GDPR Cookie Consent plugin မှသတ်မှတ်သည်။ ကွတ်ကီးများကို "Analytics" အမျိုးအစားရှိ cookie များအတွက်အသုံးပြုသူ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုသိမ်းဆည်းရန်အသုံးပြုသည်။
cookielawinfo- checbox- အလုပ်လုပ်တဲ့ 11 လအတွင်း Cookie ကိုအသုံးပြုသူ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကို“ Functional” အမျိုးအစားတွင်မှတ်တမ်းတင်ရန် GDPR ၏ cookie ကိုသဘောတူသည်။
cookielawinfo-checbox- အခြားသူများ 11 လအတွင်း ဤ cookie ကို GDPR Cookie Consent plugin မှသတ်မှတ်သည်။ Cookies အတွက်အသုံးပြုသူ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုအခြား "အမျိုးအစား" တွင်သိမ်းဆည်းရန် cookie ကိုအသုံးပြုသည်။
US မှပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ပစ္စည်းများနှင့်လေ့လာဆန်းစစ်မှုများသည်တရား ၀ င်အကြံဥာဏ်မဟုတ်ဘဲသတင်းအချက်အလက်အတွက်သာဖြစ်ပြီးဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်သို့မဟုတ်သင်၏တစ်ခုတည်းသောသတင်းအချက်အလက်ရင်းမြစ်အဖြစ်မှီခိုခြင်းမပြုသင့်ပါ။ မည်သည့်ပြissueနာနှင့်ပြproblemနာကိုမဆိုအကြံဥာဏ်ရယူရန်သင့်ရှေ့နေကိုဆက်သွယ်သင့်သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အသုံးပြုခွင့်သည်ရှေ့နေနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးကိုမဖန်တီးနိုင်ပါ။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသောထင်မြင်ချက်များနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းများသည်မစုံလင်သည်။ သတင်းအချက်အလက်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောဟုယုံကြည်ရသောရင်းမြစ်များမှထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့တိတိကျကျတိတိကျကျ၊ လုံလောက်မှု၊ ပြည့်စုံမှု၊ တရား ၀ င်မှု၊ ဤနေရာတွင်ပါရှိသောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်အသုံးဝင်မှု။ မည်သည့်အခြေအနေမျိုး၌မဆိုကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုက်၏အသုံးပြုမှုကြောင့်သို့မဟုတ်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမှီခိုခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားမည်သည့်တာဝန်ဝတ္တရားကိုမျှတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏ဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆိုက်ပေါ်ရှိမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုမှီခိုခြင်းသည်သင်ကိုယ်တိုင်အတွက်အန္တရာယ်ရှိသည်။
Visa အကူအညီပေးသူ၌ပါဝင်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်သင်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပြသခြင်းဖြင့်ဗီဇာနှင့်ခရီးသွားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖယ်ရှားရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သင်မည်သည့်ဗီဇာနှင့်သက်ဆိုင်သောမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုပါကအကူအညီလိုအပ်သည်သို့မဟုတ်လျှောက်ထားလိုသည်။ ဤမေးခွန်းများကိုလျှောက်ထားသူ၏ရှုထောင့်မှဖြေဆိုရန်သတိရပါ (ဗီဇာလျှောက်ထားသူ။ ) အကယ်၍ သင်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရှိပြီးဖြစ်ပြီးသင်လျှောက်ထားသူတစ် ဦး ဦး ကိုယ်စားကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုပါကသက်ဆိုင်ရာရွေးချယ်မှုများကိုသူတို့လာသည်နှင့်အမျှရွေးချယ်ပါ။ တက်။ သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက support ခလုတ်ကိုရွေးချယ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ထံစုံစမ်းမေးမြန်းပါ။
သင်ဤဗီဇာအတွက်လျှောက်ထားခြင်းမရှိသေးပါ။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ Visa အရည်အချင်းပြည့်မီသောစာမေးပွဲကိုဖြေဆိုရပါမည်။ ဤဗီဇာသည်လျှောက်ထားသူနှင့် ပတ်သတ်၍ (ဗီဇာလျှောက်ထားသူ) နှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းအနည်းငယ်ဖြေဆိုခြင်းအားဖြင့်ဤဗီဇာရရှိရန်အခွင့်အလမ်းများကိုပြသရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ လျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံနှင့်ပစ်မှတ်ထားသည့်တိုင်းပြည်အကြားနိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့်လုံခြုံရေးဆက်နွယ်မှုဆိုင်ရာအချိန်နှင့်တပြေးညီအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုအစီအစဉ်ချထားသည်။ ဒီစမ်းသပ်မှုလုံးဝတိကျမှုဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်သည်မဟုတ်, ၎င်း၏တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်မှာသင့်အားဗီဇာရရှိရန်ခန့်မှန်းတွက်ချက်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။ ဗီဇာရရှိရန်အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲသည်သတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာဖြစ်သည်။ ရလဒ်များကိုလျှောက်ထားရန်နောက်ဆုံးအဆုံးအဖြတ်ပေးသည့်အရာအဖြစ်မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုအသုံးချသင့်သည်။
ဤနေရာတွင်သင့်အားဗီဇာလျှောက်ထားရန်သို့မဟုတ်သင်၏လက်ရှိလျှောက်လွှာကိုအထောက်အကူပြုရန်ကူညီနိုင်သောစစ်ဆေးပြီး၊ လိုင်စင်ရလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ၏စာရင်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သင်၏ဗီဇာအမျိုးအစားကိုအထူးပြုသည့်ရှေ့နေအားကျဉ်းမြောင်းစေရန်သင်၏ဗီဇာကိစ္စနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဘယ်ဘက်ရှိစစ်ထုတ်သည့်အရာများကိုရွေးချယ်ပါ။ ရှာဖွေရေးဘားတွင်ရှေ့နေတစ် ဦး အားအမည်ဖြင့်ရှာဖွေနိုင်သည်။ မည်သည့်ပံ့ပိုးသူများ၏သင်တန်းသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ မည်သည့်ကိုယ်စားပြုချက်များသို့မဟုတ်အာမခံချက်များမပေးပါ။ သင့်အနေဖြင့်သင်၏ပေးသူကိုရွေးချယ်ရန်အရည်အချင်းများကိုအကဲဖြတ်ရန်နောက်ဆုံးတွင်သင့်တွင်တာဝန်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၊ ရှေ့နေ၏အချက်အလက်များကိုမည်သူ့ကိုမျှမဝေမျှရန်သင်သဘောတူသည်။
လျှောက်ထားသူသည်ဗီဇာမလျှောက်ထားသောကြောင့် Visa အရည်အချင်းပြည့်မီမှုစစ်ဆေးခြင်းကိုသင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ သင်၏အဖြေများနှင့်အတူရိုးသားပါ။ အမေရိကန်ဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်လိမ်လည်ခြင်းမရှိပါ၊ ဤစာမေးပွဲမှသင်သာလျှင်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်။ ဤစစ်ဆေးမှုသည်လျှောက်ထားသူ (ဗီဇာလျှောက်ထားသူ) နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းအနည်းငယ်ကိုဖြေခြင်းဖြင့်ဤဗီဇာရရှိရန်အခွင့်အလမ်းများကိုပြသရန်ရည်ရွယ်သည်။ လျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့အကြားနိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့်လုံခြုံရေးဆက်ဆံရေး၏အချိန်နှင့်တပြေးညီအချက်အလက်များကို သုံး၍ ၎င်းကိုအစီအစဉ်ချသည်။ ဤစစ်ဆေးမှုသည်လုံးဝတိကျရန်မရည်ရွယ်ပါ။ ၎င်း၏တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်မှာသင့်အားဗီဇာရရှိရန်အနီးစပ်ဆုံးပေးရန်ဖြစ်သည်။ ဤစစ်ဆေးမှုကိုတစ်ကြိမ်သာပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်ကမတူညီတဲ့ဗီဇာအတွက်စာမေးပွဲဖြေဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်အကောင့်သစ်တစ်ခုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ သင်ပြန်သွားပြီးအထက်ပါ“ My Account” option အောက်ရှိသင်၏ရလဒ်များကိုကြည့်နိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ၊ ဗီဇာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲသည်သတင်းအချက်အလတ်သက်သက်အတွက်သာဖြစ်ပြီး၊ ဗီဇာကိစ္စတိုင်းကိုသံရုံးအခြေအနေအလိုက်၎င်း၏ကောင်းကျိုးများကိုကိုင်တွယ်သောကြောင့်ရလဒ်များကိုအပြီးသတ်အဆုံးအဖြတ်မပေးသင့်ပါ။
ဤနေရာတွင်သင်၏တိုင်းပြည်နှင့်သက်ဆိုင်သောဗီဇာလမ်းညွှန်အားလုံးအတွက်စာရင်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ Drop down တွင်သင်၏နိုင်ငံကိုရှာပါ၊ ပြီးနောက်သင်ကြည့်လိုသောဗီဇာလမ်းညွှန်ကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်သည်အထက်ပါ“ My Visa Journey” ကိုနှိပ်ပြီး“ မည်သို့လျှောက်ထားရမည်” ကိုရွေးချယ်ပြီးလျှင်ဤစာမျက်နှာကိုပြန်သွားနိုင်သည်။
ဤတွင်သင်၏ဗီဇာအတွက်လျှောက်ထားရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သောစစ်ဆေးခံထားရသောတတိယပါတီမိတ်ဖက်များစာရင်းကိုတွေ့လိမ့်မည်။ မိတ်ဖက်များအားလုံးကို Visa Helper ၏စံနှုန်းများဖြင့်စစ်ဆေးသည်။ သင်သည်သူတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရန်ဤစာမျက်နှာရှိမိတ်ဖက်ကိုသင်နှိပ်နိုင်သည်။ မည်သည့်ပံ့ပိုးသူကိုမဆိုမှီခိုအားထားခြင်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများမှပေးသောသတင်းအချက်အလက်သည်သင်၏စွန့်စားမှုတစ်ခုတည်းအတွက်သာဖြစ်ကြောင်းသင်အသိအမှတ်ပြုပြီး၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သောစွန့်စားမှုအားလုံးအတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်။